Kooxda Manchester United oo qorsheynaysa inay £250m ku soo qaadato saddex ciyaaryahan oo Portuguese ah – Gool FM
Haaruun March 24, 2019
(Manchester) 24 Maarso 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la soo warinayaa inay go’aansatay inay soo iibsato saddexda ciyaaryahan ee Ruben Dias, Bruno Fernandes iyo Joao Felix.
Man United ayaan weli xaqiijin macallinkeeda xilli ciyaareedka soo socda, laakiin taasi kama horjoogsan kooxda ka dhisan horyaalka Premier League inay sii wadato bartilmaameedyadeeda ay doonayso inay la soo wareegto suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaaga.
Jariiradda The Mirror ayaa warinaysa in Man United ay isku diyaarinayso inay kharash-gareyso adduun dhan 250 milyan oo gini si ay u xaqiijiso inay la soo wareegto saddexda xiddig ee reer Portugal ee kala ah Ruben Dias, Bruno Fernandes iyo Joao Felix.
Felix iyo Fernandes ayaa labadoodaba qandaraasyo kala duwan oo waa weyn kula jira kooxaha Benfica iyo Sporting Lisbon, halka daafaca dhexe ee Dias oo ka tirsan Benfica lagu qiimeeyo adduun dhan 50 milyan oo gini.
Mid kasta oo ka mid ah ciyaartoydaan ayaa waxaa xiisaynaya kooxaha waa weyn ee ka dhisan qaaradda Yurub qaarkood, laakiin Man United ayaa doonaysa inay saxiixyadooda ku garaacdo kooxaha kula xafiiltamaya.